Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Kukadzi 24, 2021
Zimbabwe inopinda muzuva retatu ichibaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 pachishandiswa mushonga wakagadzirwa nekambani yeSinopharm yekuChina.
Vanhu vanodarika zviuru zvina nemakumi maviri nemumwe chete vanobayiwa nhomba iyi mumazuva maviri ekutanga kwechirongwa ichi izvo zvinoratidza kuti chirongwa ichi hachina kutanga zvine mutsindo munyika.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaKembo Mohadi, vanoramba mashoko nemavhidhiyo ari kutenderera pamadandemutande vachitaura nyaya dzepabonde nedzimai echidiki, vachiti zvose zviri kuitwa izvi zvakanangana nekusvibisa zita ravo.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumapato anopiksa sezvo nhengo yeMDC Alliance Amai Lilian Timveos naVaBlessing Chebundi veMDC-T vati vave nhengo dzeZanu-PF ukuwo Muzvare Thokozane Khupe vachiramba kutambira kuti vakakundwa sarudzo yekutungamira MDC-T naVaDougla Mwonzora.
Nhengo yeZanu PF huru inobvuma kuti vakuru vakuru muZanu PF nemuhurumende vari kutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo.
Studio7 inotarisa zvakadzama zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.